celebrity Archives - Page2of 57 - TheeSayChin
G – Fatt ကေ တာ့ FA တစ်ယောက်မဟု တ်တော့ဘူး လို့ ပြော လာပီ
G-Fatt တစ်ယောက် သီချင်းတွေအပေါ်ချစ်တဲ့စိတ်ကြောင့်လည်း သူ့ရဲ့သီချင်းစာသားတွေဟာ သူများတွေနဲ့ မတူဘဲ ပရိသတ်တွေရင်ထဲကို တိုက်ရိုက်ထိရှစေတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ အမိုက်စား အကြမ်းစား Flow တွေနဲ့ ထိမိနေအောင်သီချင်းတွေကို သီဆိုနိုင်တဲ့ သူဖြစ်တာကြောင့် အနုပညာအပေါ် စိတ်နှစ်ထားသူတစ်ယောက်ဆိုတာ သူ့ရဲ့ သီချင်းတွေကြားရုံနဲ့ သိနိုင်မှာပါ။ အချစ်ရေးကြောင့် အသဲကွဲဝေဒနာကို ခံစားနေရတဲ့ G-Fatt ကို သူ့ရဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ စိတ်ပူပန်နေကြပေမဲ့လည်း G-Fatt ကတော့ အသဲကွဲဒဏ်ရာတွေကို အလုပ်တွေကိုကြိုးစားလုပ်ကိုင်ခြင်းတွေနဲ့ ကုစားနေတဲ့ လို့ဆိုရမလောက်ကို အလုပ်တွေကို တစိုက်မတ်မတ်လုပ်ကိုင်နေကြတာလည်း ပရိသတ်တွေမြင်တွေ့မယ်ထင်မှာပါ။ တချို့သောပရိသတ်တွေကတော့ သူတို့နှစ်ဦးကို ပြန်အဆင်ပြေစေချင်တဲ့ မှတ်ချက်တွေ ခုချိန်ထိ ပေးနေကြပြီး တစ်ချိုကပရိသတ်တွေကတော့ G – Fatt ကို တစ်ကိုယ်တည်း လူပျိုကြီးဘဝနဲ့ အရိုးထုတ်ပြီး Forever Alone ဖြစ်တော့မှာလားလို့ […]
(၇)ရက် အတွင်း (၈)ပေါင်ကျော်ဝိ တ်ကျသွားစေခဲ့ တဲ့ နည်းလမ်းကိုပြောပြလာ တဲ့ တင်ဇာမော်
ပရိ သတ်ကြီးရေ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော်ဖြစ်တဲ့ အဆိုတော် တင်ဇာမော်ကတော့ လောလောလတ်လတ် ဒီရက်ပိုင်းထဲမှာ ဝိတ်တွေ(၈)ပေါင်လောက်ကို ကျသွားပါပြီတဲ့။ရက်ပေါင်း (၇)ရက်အတွင်းမှာကို ဝိတ်(၈)ပေါင်ကျော်ကျော်ကျသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး တစ်ရက်ကို (၁)ပေါင်ကျော်ကျော်လောက်ကို ကျသွားခဲ့တာပါ။အခုလို ဝိတ်တွေကျပြီး ပိုပိုလှလာတဲ့အတွက်ကို တင်ဇာမော်က ပျော်ရွှင်ကျေနပ်နေခဲ့ပါသေးတယ်။ အဆိုတော် တင်ဇာမော် ကိုယ်တိုင်တောင် အံ့သြဝမ်းသာမဆုံးဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ တစ်ရက်ကို (၁)ပေါင်ကျော်နီးပါးကျသွားခဲ့တဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ (၇)ရက်လောက် သက်သက်လွတ်စားခဲ့ရင်းကနေ စားချင်စိတ်တွေဖြစ်နေတာကို ထိန်းထားခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။(၇)ရက်လေး သက်သက်လွတ်စားရင်း စားချင်စိတ်ဆိုတဲ့ လောဘကို စောင့်ကြည့်ပြီး ထိန်းသိမ်းလိုက်တာ မထင်မှတ်ဘဲ (၈)ပေါင်ကျော်ကျော် ကျသွားတာ အံ့သြမဆုံးဘူး ကျေနပ်တာ ဆိုပြီး ဝိတ်ကျသွားခဲ့တဲ့ အကြောင်းကို သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထက်ကနေ ဖော်ပြထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို သက်သက်လွတ်စားရင်းကနေ စားချင်တဲ့ လောဘစိတ်ကို ထိန်းပြီးနေခဲ့တာကြောင့် ဝိတ်တွေကျပြီး လှသွားခဲ့တာဆိုတော့ တင်ဇာမော်တစ်ယောက်က ကုသိုလ်လည်းရ လှလည်းလှဖြစ်သွားခဲ့ရတာပေါ့။ပရိသတ်ကြီးတွေလည်း […]
ပရိ တ်သတ်တွေ သဘောတူနေကြ တဲ့ ယွန်းယွန်း နဲ့ အုပ်စိုးခန့်တို့ စုံတွဲ ပုံလေးတွေ
အုပ်စိုးခန့် ဟာ အသက်ငယ်ရွယ်ပေမဲ့ ဂီတလောကမှာ နေရာတစ်နေရာရယူထားနိုင်သူပါ… အထူး သဖြင့် အဆိုအပြင် ကိုရီးယားမင်းသားတစ်ယောက်လို ချောမောတဲ့ ရုပ်ရည်ကြောင့် နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေ အသည်းစွဲ အားပေးတဲ့ အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်…. ဒါ့အပြင် ယွန်းယွန်းဟာလည်း ငယ်စဉ်ကတည်းက သရုပ်ဆောင်ကောင်းတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပြီး လက်ရှိအရွယ်ထိ ပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်…. လတ်တလောမှာတော့ အုပ်စိုးခန့်နဲ့ ယွန်းယွန်းတို့ အတူတွဲပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ ကြော်ငြာဓာတ်ပုံလေးတွေက ပရိသတ်တွေကြားမှာ အပြောများနေတာပါ… နှစ်ယောက်စလုံးကလည်း အသက်အရွယ်ငယ်ရွယ်ကြပေမဲ့ ထူးချွန်တဲ့ အနုပညာရှင်တွေဖြစ်တာကြောင့်တစ်ကြောင်း လိုက်ဖက်ညီတဲ့ သူတို့ရဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေကြောင့်တစ်ကြောင်း ပရိသတ်တွေက သူတို့နှစ်ဦးပုံလေးတွေကို သဘောကျနေကြတာပါ…. လိုက်ဖက်ညီပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ အတူတွဲပြီး D & C ကြော်ငြာကို သရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပါ…. သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုလည်း ပရိသတ်ကြီးတို့ ကြည့်ရှုနိုင်အောင် ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ရပါတယ်နော်… […]
Jungkook ကို လှောင်ပြောင်ခဲ့လို့ BTS ဖန်တွေရဲ့ အပြစ်တင်ခံနေရတဲ့ ရုပ်သံလိုင်း
[email protected] Instagram-Jungkook 2019 ခုနှစ်အတွက် ကမ္ဘာ့ယောကျ်ားအပီသဆုံးဆုကို ရရှိသွားတဲ့ BTS အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဖြစ်သူ Jungkook ကို ပိုလန်နိုင်ငံရှိ ရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုမှ လှောင်ပြောင်ခဲ့ကြောင်း Next Shark သတင်းဌာနရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ သိရှိရပါတယ်။ DDTVN လို့ အမည်ရရှိတဲ့ အဆိုပါ တီဗ္ဗီရုပ်သံလိုင်းမှ အစီအစဉ်တင်ဆက်သူနှစ်ဦးဟာ Jungkook ဟာ ယေကျ်ားပုံစံအရမ်းမပေါက်ကြောင်း၊ သူဟာ လူကြီးပုံစံမဟုတ်ပဲ ကောင်လေးပုံစံလေးသာဖြစ်ကြောင်း အစီအစဉ်တင်ဆက်ရင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ how embarrassing,, grown ass adults pressed because an asian won most handsome man they hate to see it #dziendobrytvnisoverparty pic.twitter.com/mSyZxbG1K4 — jackie […]
Balla Hadid ကို ထိကပါးရိကပါးလုပ္ခဲ့တဲ့တယ္ဆိုတဲ့ Victoria’s Secret ရဲ႕ အရာရွိ
အခုလက်ရှိ နိုင်ငံခြားမော်ဒယ်လောကမှာ Victoria’s Secret ရဲ့ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဟာ သူ့လက်အောက်က မော်ဒယ်တွေနဲ့ လက်အောက်ငယ်သားဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ စော်ကားမှုတွေအပြင် ကိုယ်ထိလက်ရောက်ကျူးလွန်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီး သတင်းတွေ ထွက်နေကြာင်း The New York Times သတင်းဌာနရဲ့ ဖော်ပြမှုအရ သိရှိရပါတယ်။ [email protected] Razek အသက် ၇၁ နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ Ed Razek လို့ အမည်ရတဲ့ Victoria’s Secret ရဲ့ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဟာ ၂၀၁၈ တုန်းက ဖက်ရှင်ရှိုးမစခင်မှာလည်း မော်ဒယ်တွေရဲ့ အဝတ်လဲခန်းထဲရောက်လာပြီး Bella Hadid ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဝေဖန်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Bella Haddid ရဲ့ ရင်သားတွေကို သေးငယ်နေတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလိုပြောပြီး အခြားမော်ဒယ်တစ်ယောက် ဘောင်းဘီလဲနေတဲ့အချိန် […]
အဝါရောင်ဖက်ရှင်လေးနဲ့ လှချင်တိုင်းလှ နေတဲ့ စိုးပြည့်သဇင်
ဘရာမဲ့ ဖောက်ထွင်းဖက်ရှင်နဲ့ ပွဲတက်လာတဲ့ Johnny Depp ရဲ့ သမီး Lily-Rose
Image:IG/ Lily-Rose Johnny Depp ရဲ့ သမီး Lily-Rose ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်က ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ BAFT A ပွဲကို တက် ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲကိုတော့ လုံးဝ ဖောက် ထွင်းမြင်လို့ ရတဲ့ ပွဲတက် ဖက်ရှင် မျိုးနဲ့ တက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။Lily အတွက်က တော့ ဒါဟာ BAFTAs ပွဲကို ပထမ ဆုံး အကြိမ် တက်ရောက်တာပါ။ Lily-Rose ကတော့ Johnny Depp နဲ့ Vanessa Paradis ရဲ့ သမီးပါ။ Image:IG/ Lily-Rose Image:IG/ Lily-Rose အသက် (၂၀) ရှိနေတဲ့ သူမကတော့ အနက်ရောင် Jumpsuit ဝတ်စုံကို ဝတ်ဆင် လခာဲ့တာပါ။ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်တဲ့ ဇာ အနက်ရောင် မျိုးဖြစ်ပြီး ပန်းပွင့်ပုံစံ လေးတွေ နဲ့ အလှ […]
ပရိသတ်တွေ အထူးအဆန်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ Shakira ရဲ့ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှု
[email protected]_Asset Shakira လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ တော်တော်များများဟာ ကမ္ဘားဖလားပွဲက Waka-Waka သီချင်းကို ပြေးမြင်မိမှာပါ။ အဲဒီလို ပြေးမြင်လောက်အောင်ပဲ Shakira ဟာ တော်တော်နာမည်ကြီးတဲ့ ကိုလံဘီယာ အမျိုးသမီးအဆိုရှင်တစ်ဦးပါ။ ဒါပေမယ့် အခု ပရိသတ်တော်တော်များများ အထူးအဆန်းဖြစ်နေတာက Sharkira တစ်ယောက် Super Bowl Half Time Show မှာ သီချင်းဆိုနေစဉ် ပြုလုပ်သွားတဲ့ အပြုအမူတစ်ခုကြောင့်ပါပဲ။ If I ain’t seen anything ever that’s more meme-worthy, I give you Shakira tongue lol pic.twitter.com/6HcOGBa7Mx — Neek✊? (@Sarcastic_Asset) February 3, 2020 ဗီဒီယိုထဲမှာတွေ့မြင်ရတဲ့အတိုင်း Shakira ဟာ […]
Goodbye MTV ထဲမှာ ကိုယ်တိုင်ကတုံးရိတ်ပြီး ပီပီပြင်ပြင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ “မေ”
fb page/ May “မေ” ကတော့ အသံချိုချိုလေးနဲ့ အဆွေးသီချင်းလေးတွေကို ရင်ထဲကနေနှစ်နှစ်ကာကာခံစားပြီး သီဆိုတက်တဲ့ ပရိသတ်လက်ခံအားပေးမှုအပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ အဆိုတော်၊ သရုပ်ဆောင် မော်ဒယ်တစ်ယောက်ပါ။ မေရဲ့ သီချင်းအသစ်လေးဖြစ်တဲ့ “Good Bye” သီချင်းလေးကတော့ ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက်နေ့မှာ ထွက်ရှိထားပါတယ်။ သီချင်းလေးကတော့ အဆွေးသီချင်းအမျိုးအစားလေးဖြစ်ပြီး ပရိသတ်ရင်ထဲကို ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ အောင်မြင်တဲ့သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ fb page/ May သီချင်းလေးရဲ့အကြောင်းအရာကတော့ “မေ” က သူမကြုံတွေ့ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ အတိတ်တွေနဲ့ ရုန်းကန်ရတဲ့အချိန်တွေကို ဒီသီချင်းလေးထဲကနေ နှုတ်ဆက်ထားတဲ့အကြောင်းလေးပါ။ MTV လေးကိုတော့ black & white ပုံစံရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး “မေ” ကိုယ်တိုင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ သူမရဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေက ပိုင်နိုင်လွန်းလို့ ကြည့်မိသူတိုင်းကို သူမရဲ့ရင်ထဲက ဝမ်းနည်းပူလောင်နေတဲ့ ခံစားချက်တွေကို အတိုင်းသားမြင်ရမှာပါ။ fb page/ […]
သမီးဖြစ်သူ အတွက် ခမ်းနားဆန်းပြားတဲ့ မွေးနေ့ပွဲ ကျင်းပ ပေးခဲ့တဲ့ Kylie Jenner